लिम्वूवान - विविध सामग्री: हाम्रा सुनाखरीहरु कसरी जोगाउने ?
आलोपालो नेपाल सुनाखरी धेरै फुल्ने ना चैत, बैशाख र जेष्ठ । सुख्खायाममा सुनाखरीका धेरै प्रजाति फुल्छन । घरभित्र होस वा आगन हिजोआज सुनाखरी रोप्ने चलन बृद्धिएको छ । फूलका प्रेमीहरु मनै लोभ्याउने सुनाखरी ब्रि्रीमा भेटे एउटा गमलाको ८, १० हजार रुपैयासम्ममा किन्न पछि पर्दैनन । धरान-१० का पुष्प व्यवसायी योगेन्द्र फोम्बो सुब्बाको यस्तै अनुभव छ ।
योगेन्द्रलाई मनपर्ने फूल सुनाखरी । धरान छेउछाउ जंगलबाट उनले थुप्रै प्रजातिका सुनाखरी संकलन गरीसकेका छन । कसैले योगेन दाई त्यो जंगलमा राम्रो सुनाखरी फुलेको छ, जाने होइन भने उनी कहिल्यै भन्दैनन् हुदैन । योगेन दाइको आफनै गार्डेनमा सुनाखरीका धेरै प्रजाति जुटाउने शिलशिलामा सुनाखरी प्रति मोह बसेको हो । धरान आसपासको जंगलमा कस्ता सुनाखरी पाइन्छ राम्रो हेक्का राख्ने योगेनले अझ कुन सुनाखरीको प्रजाति कहाको पुष्प प्रदर्शनीमा कसले कतिमा बेच्यो सबै थाहा पाउछन । लेखक - कमल मादेन काठमाडौमा योगेन्द्र जस्तै तर अलि भिन्न प्रकृतिले सुनाखरी पछि दौड्ने लोकेशरत्न शाक्यलाई पनि सुनाखरी प्रेमी भने फरक नपर्ने उनका सहकर्मीहरु बताउूछन । सुनाखरीमा पि।एच।डि। गरेका डा। शाक्यको बिगत नियाल्ने हो भने उनी सुनाखरीका पक्का अनुसंधानकर्ता हुन । बर्षोनी २, ३ चोटि सुनाखरी अनुसंधानमा निस्कने डा। शाक्यले भर्खरै अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट बिश्वका लागि नया सुनाखरीको एउटा प्रजाति र एउटा भेयराइटी पत्ता लगाएका छन ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पहिलो पटक पाइएको हुनाले उनले त्यो प्रजातिको नाम पनि अन्नपूर्णसंगै जोडेका छन । अब त्यो सुनाखरी इरिया अन्नपुर्र्णोन्स् को नामले संसारभर चिनिने छ । डा. शाक्यले यसअघि पनि बिश्वका लागि नया सुनाखरी अर्थात न्यु टु साइन्स पत्ता लगाइ सकेका छन । सुनाखरीका डाक्टर शाक्यमात्र होइनन् । उनीसूगै अमृत साइन्स कलेजमा अध्यापन गराउने देबेन्द्रमान बज्रचार्य पनि सुनाखरीका डाक्टर हुन । उनको पनि २, ३ प्रजाति न्यू टु साइन्स छ । सुनाखरी अनुसंधानमा लिप्तहुने यी दुई अनुसंधानकर्ता बाहेक पोखराका आबिष्कार सुबेदी सुनाखरी खोजमा लाग्ने अर्का युवा अनुसंधानकर्ता हुन । यी तिनै जनाभन्दा पृथक ढंगले सुनाखरीमा बिशेषज्ञता हासिल गर्ने डा। केशवराज राजजभण्डारीले नेपालका सुन्दर सुनाखरीहरु नामक पुस्तक लेखेका छन । पुस्तक सुनाखरी प्रेमीहरुका निम्ति र बिशेषगरी बनस्पतिशास्त्रमा चासो राख्नेहरुका लागि अत्यन्त लाभदायक छ । उक्त पुस्तकमा १ सय १ प्रजातिका सुनाखरीको रंगिन तस्बिर सहित तिनीहरुको नालीबेली व्याख्यान गरिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढि सुनाखरी पाइने क्षेत्र मोरङ्गस्थित भोगटेनी गाविसको राजारानी पोखरी हो । यो पोखरी लेटाङ्ग बजारदेखि उत्तर पश्चिमतर्फकरिव १ घण्टाको पैदलदुरीमा छ ।
पोखरी भित्र रहेका स-साना रुखमा सुनाखरीका झुण्डहरु प्रशस्त छन । नेपालमा बिरलै पाइने ७ प्रजातिका सुनाखरी सहित पोखरी र पोखरी आसपासको ४ बर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा ४५ प्रजातिका सुनाखरी पाइएको छ । राजारानीको सुनाखरीका कारण डा। शाक्यले अमेरीका भ्रमण गर्ने अवसर पाएको बताउछन । अमेरीकामा सम्पन्न सुनाखरी सम्बन्धि कार्यशालामा राजारानीका सुनाखरीका बारेमा तथ्याङ्क सुनेर बिश्वको धेरै सुनाखरी बिशेषज्ञहरु दङ्ग परेको डा। शाक्यको अनुभव छ । जापानीजहरुको सुनाखरी प्रति मोह अझ रमाइलो छ । डा। शाक्यले राजारानी पोखरी र त्यहा पाइने केही सुनाखरीका तस्बिर जापानिज मित्रलाई दिएका थिए । ति जापानीज मित्रले त जापानमा आयोजित सुनाखरी सम्बन्धित गोष्ठिमा राजारानीको सुनाखरी जोगाउ भनेर पोष्टर प्रदर्शन नै गरे । डा। शाक्यका अनुसार २ बर्षअघि त्यही पोष्टरका कारण एक हुल जापानिज राजारानी जान काठमाडौं आएका थिए । तर्राईबन्दका कारण उनीहरु राजारानी पुग्न सकेनन् । सुनाखरी पुष्पव्यवसायी र फूलका सौखिनहरुका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यसको उचित संरक्षण र र्सवद्वन हुन सकेको छैन ।
राजारानी जस्ता अनेकौं ठाउबाट सुनाखरी बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । तर राजारानीबाट भने सुनाखरी बाहिर लैजान बन्देज छ । नियममा सुनाखरी ओसारपसार गर्न नपाइने भए पनि यसको व्यवहारिकता पाइदैन । उदाहरणको लागि सुनाखरीकै पाँचऔले प्रजाति औषधिय दृष्ट्रिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको जरा हातको पाँच औला जोडिएको तरुल आकृतिको हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा यसको काण्ड र तरुल आकृतिको जरा टाउको दुखेको, ज्वरो, खोकी, चिसो र घाउ खटिरामा औषधिको रुपमा प्रयोग गर्छन । आयुर्वेद प्रणालीमा यसको जरा तागत बढाउन, यौन शक्ति वा उक्तेजना बढाउन प्रयोग गरिन्छ । स्थानीय बजारमा यसको जरा प्रतिगोटा २० रुपैया सम्म पर्दछ । यसको तरुल आकृतिको जरा ठूलै परिमाणमा बिदेश निर्यात हुने गरेको छ । संखुवासभा टुटेदेउरालीका बासिन्दा छिरिङ्ग लामाका अनुसार ताप्लेजुङ्ग र संखुवासभाको उत्तरी भेगबाट पाचऔले असोज कार्तिक तिर हप्तामा सयौं केजी तिब्बततर्फनिकासी हुने गरेको छ । बिश्वमा पाइने सुनाखरीका करिव १७ हजार प्रजातिमध्ये नेपालमा ४ सय जति प्रजाति पाइएको छ । सुन्दर फूलफुल्ने धेरै नेपाली सुनाखरी प्राकृतिक बासस्थानबाट कमि हुदै गएको छ । हिजोआज ठूला होटल, बंगलाहरुमा सज्जाका लागि बिदेशी सुनाखरी ओइरीन थालेको छ । हाम्रा सुनाखरी कसरी बाहिर निर्यात भइरहे छ, भरपर्दो अभिलेख छैन । यस्तो स्थितिमा हामीले कसरी जोगाउने
Posted by limbu at 6:13 PM